Kanelina: Inona izany ary ahoana ny fametrahana azy amin'ny DEBIAN 10 sy MX-Linux 19? | Avy amin'ny Linux
kanelina tsara tarehy sy miasa izy io Tontolo iainana Desktop, momba izay tsy amoahanay matetika, dia ny anay lahatsoratra farany manondro momba izany, 3 taona mahery lasa izay.
Azo antoka fa izany dia vokatry ny zava-misy, amin'ny ankapobeny, izy io ihany no resahina Linux Mint, nanomboka tamin'izay Tontolo iainana Desktop teraka niaraka tamin'ity Fitsinjarana GNU / Linux. Noho izany, amin'ity boky ity dia hifantoka manokana amin'ny Inona izany? y Ahoana ny fametrahana anao?. Manasongadina, mazava ho azy, ny ankehitriny DEBIAN GNU / Linux-fizarana meta, ao anatin'ny vao haingana indrindra Malagasy Bible, la laharana 10, anarana kaody Buster. Izay koa no fototry ny Distro MX-Linux 19 (Duckling mahatsiravina).
Ny mpamorona azy (Linux Mint) dia nilaza fa ny Kanelina dia:
"Birao Linux misy famolavolana nentin-drazana, natsangana tamin'ny haitao maoderina ary mampiditra endrika vaovao vaovao. Cinnamon dia birao Linux izay manome fiasa mandroso sy traikefa nentin-drazana ho an'ny mpampiasa. Ny layout desktop dia mitovy amin'ny Gnome 2 miaraka amin'ny teknolojia Gnome Shell misy fotony. Kanelina dia mahatonga ny mpampiasa hahatsapa ho ao an-trano miaraka amina fiainana mora amin'ny desktop sy ahazoana aina. Fizarana kanelina amin'ny tranokala Linux Mint ao amin'ny GitHub
1 Ny rehetra momba ny kanelina
Ny rehetra momba ny kanelina
Ny tetikasa amin'ny kanelina navoaka tamin'ny daty Desambra 20 amin'ny 2011 fa nambara ampahibemaso tamin'ny January 2 amin'ny 2012 ao amin'ny bilaogin'i Linux Mint. Ny dikanteniny voalohany dia momba Linux Mint 12 "Lisa".
Avy amin'ny 2.0 version, Kanelina dia a Tontolo iainana Desktop feno, ary tsy vodilaharana ho an'ny GNOME toy ny GNOME Shell sy Unity fotsiny.
Handeha ho an'ny stable version 4.4.2
Fanamafisana tsara ny lehibe Linux Mint Distro.
Mifantoka amin'ny manatsara ny famokarana mpampiasa amin'ny rafitra fiasa.
Manolotra a mahay mandanjalanja eo anelanelan'ny hafainganam-pandeha, ny fitoniana ary ny fampiasana.
Manomboka tafiditra ao amin'ny tahiry amin'ny Distros maro.
tena namboarina sy maivana, indrindra amin'ny sehatra Panel sy Desktop amin'ny alàlan'ny fananganana mandroso sy ny fitomboany lohahevitra, applet, latabatra ary fanitarana.
Mifanaraka amin'ny zanatany miaraka amin'ny rindranasa GNOME3 satria samy mampiasa GTK +.
Mety ho an'ny olona izay manomboka mifindra miala amin'ny Windows mankany GNU / Linux, satria ny interface dia manome azy ireo a atmosfera somary mahazatra sy tena mora ampiasaina.
Matetika mandany a loharanom-pahalalana betsaka (RAM sy CPU), mitovy amin'ny tontolon'ny birao toa ny KDE Plasma sy GNOME.
Optimised mba hiasa fanafainganana ny fitaovana, noho izany dia miasa tsara indrindra amin'ny karatra sary tsara sy solosaina tsara. Na izany aza, manana fomba hafainganam-pandeha haingam-pandeha rindrambaiko izy.
Ary noho io antony io ihany no fiasan'ny hafainganam-pandeha matetika izy io dia mampiseho ny tsy fitoviana amin'ny fampiasana ireo milina virtoaly, toy ny VirtualBox.
Tranonkala ofisialin'ny Tetikasa Kanelina
Tranonkala ofisialy Distro Linux Mint
Aiza no ahitanao fampahalalana sy / na fisintomana Hevitra, applet, takelaka ary fanitarana momba ny kanelina, na mahita topi-maso fampahalalana, misintona avy amin'ny Distro, jereo ireo tetik'asa sy ekipa mifandraika amin'izany, ankoatry ny zavatra maro hafa. Ireto rohy manaraka ireto dia misy ihany koa ho famenony ny vaovao kanelina:
Bilaogy Linux Mint
Tetikasa Linux Mint
Space momba ny kanelina amin'ny GitHub
Arch Wiki amin'ny kanelina
Safidio ny Tontolo iainana Desktop Kanelina ary ny fitaovana hafa na ny fonosana fanampiny.
Fanamarihana: Azonao atao koa ny mametraka ny tontolon'ny Desktop miorina amin'ny kanelina tsotra na feno amin'ny fanoloana ny fonosana cinnamon ny cinnamon-core o cinnamon-desktop-environment.
Famerenana indray ary fidio amin'ny fisafidianana ny Tontolo iainana Desktop kanelina, raha toa ka manana mihoatra ny iray Tontolo iainana Desktop napetraka ary tsy nifidy ny Mpandrindra Login-session kanelina.
Ary tsarovy, ity no Lahatsoratra fahefatra amin'ny andiany iray momba Tontolo iainana Desktop GNU / Linux. Ny voalohany dia momba GNOME, Luego KDE Plasma y XFCE. Raha ny manaraka kosa dia ho MATE, LXDE ary farany LXQT.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" momba ny «Entorno de Escritorio» fantatra amin'ny anarana hoe «Cinnamon», izay eo amin'ireo maro misy, izy io dia iray amin'ireo kanto sy be ranoka indrindra eto amin'izao tontolo izao «Distribuciones GNU/Linux», dia mahaliana sy mahasoa be, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Kanelina: Inona izany ary ahoana ny fametrahana azy amin'ny DEBIAN 10 sy MX-Linux 19?
usdiariom dia hoy izy:
Miaraka amin'ny debian dia lasa birao malalako izy satria afaka manana ny zava-drehetra haingana aho, ny gnome sy ny KDE dia mahavariana ary feno kokoa izany eny, saingy tsy tiako ny manao tsindry bebe kokoa hahazoana toerana iray, ny fahatsoran'ny kanelina, ny applet amin'ny toetr'andro, hitsin-dàlana amin'ny takelaka ary raha manampy conky aho dia manana izay tiako rehetra aho.
Mamaly amin'ny usodiariom
Ny olana amin'i Debian dia ny tsy firindrany tsara toa ny Mint. Tsy maintsy manampy, ohatra, ny fonosana fanavaozana ny fonosana izay mampitombo ny dian-tongotra RAM.
Inona ny kinova napetraka ao amin'ny MX-Linux? Aiza no misy azy eo amin'ny kinova "farany" napetraka ao amin'ny Mint sy ny kinova "prehistorika" napetraka ao amin'ny Debian?
Miarahaba anao, Sebas. Ny baiko hoe "apt search cinnamon" dia mitatitra izao manaraka izao: kanelina / stable 3.8.8-1 amd64
Tanisao ny kinova Chrome 80 vaovao miaraka amin'ny fanakanana fampandrenesana sy maro hafa